A KỌRỌ NA IHE DỊKA NDỊ ỌRỤ IRI ANỌ SITERE NA SWEDISH EA DICE STUDIO NA-APỤ. - AKỤKỌ - 2019
A na-ekwu na ebubo nke Star Wars Battlefront nke Abụọ.
Ụlọ ọrụ Swedish nke DICE, bụ nke Electronic Arts, nwere ihe dị ka pasent 10 nke ndị ọrụ ya n'afọ gara aga, ma ọ bụ ihe dị ka mmadụ 40 n'ime 400. Otú ọ dị, dị ka akụkọ ụfọdụ si kwuo, ọnụ ọgụgụ a dị ala ọbụna karịa nọmba ahụ.
Enwere ihe abụọ kpatara ọpụpụ ndị mmepe si DICE. Nke mbụ bụ asọmpi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Na Stockholm, Eze na Paradox Interactive adịlarị oge ụfọdụ, ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya na Sweden mepekwara Epic Games na Ubisoft. A na-akọ na ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ mbụ DICE gara ụlọ ọrụ anọ a.
Ihe nke abuo a na - akp o mmechuihu kachasi n'oge a (mgbe a na - akwadebe Agha V maka nkwuputa) site oru nke ulo oru - Star Wars Battlefront II. Mgbe ha na-apụ, egwuregwu ahụ chere ọtụtụ nkatọ ihu na-adabere n'ihe ndị e ji eme nnyocha, na Electronic Arts kụziiri ndị na-emepụta ihe iji mee ngwa ngwa iweghachi ngwaahịa a tọhapụrụ. Eleghị anya, ụfọdụ ndị mmepe weere nke a dị ka ọdịda onwe onye ma kpebie ịnwale aka ha n'ebe ọzọ.
Ndị nnọchianya nke DICE na EA ekwughị banyere ozi a.